ပါစတာ နှင့် ဟင်းရွက်စုံကြော် | Wutyee Food House
« ကြက်တောင်ပံ အစားသွပ်
ပါစတာ နှင့် ဟင်းရွက်စုံကြော်
January 13, 2010 by chowutyee ပါစတာ နှင့် ဟင်းရွက်စုံကြော် (၃ယောက်စာ)
၁။ ဘိုစားပဲ – ၅ကျပ်သား (အရှည်အစောင်းလှီးပါ)
၂။ တူနာငါး သံဗူး ( ၂၀၀ဂရမ်) (အရှည် လှီးပါ)
၃။ ခရမ်းချဉ်သီး – ၂လုံး (၈စ်ိပ်စိပ်ပါ)
၄။ မုန်လာဥနီ – ၂လုံး ( အ၀ိုင်းလှီးပါ)
၅။ ပြောင်းဖူးသေး – ၈ခု (အစောင်းလှီးပါ)
၆။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၄ပင် (ပါးပါးလှီးပါ)
၇။ သံလွင်ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၈ဇွန်း
၈။ ရှာလကာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၉။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၁မွှာ (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၁၁။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း)
၁၂။ ပါစတာ ( ၄၀၀ – ၅၀၀ဂရမ်)
၁။ ပါစတာကို ရေနွေးဖြင့် နူအောင်ထိ ၈မိနစ်ခန့် မီးအလယ်အလတ်ဖြင့် ပြုတ်ထားပေးပါ။ ပြီးလျှင် ဇကာဖြင့် ရေစစ်ထားပေးပါ။
၂။ ထို့နောက် ဘိုစားပဲ၊ မုန်လာဥနီ၊ ပြောင်းဖူးသေးများကို ရေနွေးဖြင့် ၂မိနစ်ခန့် ရေနွေးဖျော်ပေးပြီးမှ ရေအေးဖြင့် ပြန်စိမ်ထားပါ။
၃။ ဒယ်ထဲ သံလွင်ဆီ (သို့) ဟင်းရွက်ဆီထည့် ကြက်သွန်ဖြူ ဆီသပ်ပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ဘိုစားပဲ၊ မုန်လာဥနီ၊ ပြောင်းဖူးသေး၊ ကြက်သွန်မြိတ်ထည့် မွှေပေးပါ။
၄။ တူနာငါး၊ ပါစတာကိုထည့် ရေကိုဖြန်းရုံထည့်ပြီး မီးအလယ်အလတ်ဖြင့် မွှေပေးပါ။
၅။ ပြီးမှ အရသာအပေါ့အငံအတွက် ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း)၊ ရှာလကာရည်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ဖြူးပေးပါ။
၆။ ပါစတာဟင်းလျာကို စားသုံးနိုင်ပါပြီး။ ပါစတာကြိုက်နှစ်သက်သူများ နှစ်ချိုက်မည့် ဟင်းလျာဖြစ်ပါတယ်။
– ပါစတာနှင့် ဟင်းရွက်စုံကြော်ဟင်းက ၀တ်ရည်ထွင်ထားတဲ့ ဟင်းပါ။ ၀တ်ရည်က ပါစတာကြိုက်တာကြောင့် သူနှင့် လိုက်ဖက်မည့် အမည်များနှင့် တွဲဖက်ချက်ထားပါတယ်။ ချက်စားကြည့်ပါ ပါစတာကြိုက်သူများ ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါလ်ိမ့်မယ်။
Posted in အနောက်တိုင်း ချက်ြ့ပုတ်နည်း |7Comments	7 Responses
on January 13, 2010 at 9:14 am | Reply Hmone Gyi
WOW this one look very yummy and look easy to make …. i have some pasta at home will try
on January 13, 2010 at 12:19 pm | Reply leo
on January 13, 2010 at 2:00 pm | Reply Hmone Gyi
bal loe lote sar tawe tar lae ….image bal see ya har ko
on March 17, 2010 at 1:49 am | Reply ငြိမ်းငြိမ်း
ပါစတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ နောက်တစ်နည်းလက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်။ ဟင်းချက်ဖို့အချိန်မရတဲ့နေ့ မျိုးအတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးတစ်လုံးလှီးပြီး ပန်းကန်ထဲမှာတူနာဘူးသေးတစ်ဘူးနဲ့ရောမွှေပါ။ ပါစတာပြုတ်ပြီး ရေစစ်ပြီးတာနဲ့ ခုနရောမွှေထားတဲ့ပန်းကန်ထဲ ရောထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးပါပြီ။ နာမည်ကြီးနွေရာသီစာပါ။ သြော် အရေးကြီးတာကပါစတာပြုတ်ရင် ရေထည့် ဆားထည့် ရေဗွမ်းဗွမ်းဆူမှ ပါစတာထည့်ပါ။
on March 17, 2010 at 5:27 am | Reply chowutyee
မငြိမ်းငြိမ်း ပါစတာ ချက်နည်းလေးအတွက် ကျေးဇူုးပဲနော် လုပ်စားကြည့်ပါအုန်းမယ်..🙂
on February 8, 2012 at 6:40 am | Reply fkthet
on February 8, 2012 at 2:09 pm | Reply chowutyee
Plz try it!!🙂